प्लाज्मा थेरापीका लागि काम सुरु « Jana Aastha News Online
प्लाज्मा थेरापीका लागि काम सुरु
प्रकाशित मिति : ९ भाद्र २०७७, मंगलवार १९:००
कोभिड १९ बाट संक्रमित विरामीहरुको जीवन बचाउनको लागि सफल र महत्वपूर्ण मानिएको प्लाज्मा थेरापीलाई व्यवस्थित गर्ने काम सुरु भएको छ । प्लाज्मा थेरापीको लागि रगत समूह पहिचान गर्ने क्रममा कोभिड अस्पताल बेल्टारमा उपचारत २२ जना संक्रमित र सफल उपचारपछि घरै बसेका त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केका ९ जनाको रक्त समूह पहिचानको काम सकिएको छ ।
जनस्वावस्थ्य प्रमुख मोहन सुवेदीका अनुसार निको भएका र संक्रमित दुवैको रक्त समूहको पहिचान भएपछि क्रिटिकल समयमा प्लाज्मा थेरापी तत्कालै उपयोग गर्न सकिने छ । यसले कोरोनाबाट मृत्यु हुनबाट जोगाउने छ । उदयपुरमा अहिले कोरोना समुदायस्तरमा फैलिएको भेटिए पनि अन्य जिल्लाहरुमा जस्तो त्यसले व्यापकरुपमा प्रभावित गर्न सकेको छैन् । यसको श्रेय डिसीसीएमसीको सफल रणनीतिलाई लिइएको छ । जिल्लास्थित सबै पालिकाहरुको सक्रियतामा कोरोना परिक्षणको दायरालाई बृद्धि गरेकोले नियन्त्रणमा निकै ठूलो सहयोग पुगेको छ ।
त्रियुगा, बेलका र चौदण्डी नगरपालिकाहरुले पीसिआर प्रविधिबाट कोरोना परिक्षणको लागि आवश्यक भिटिएन खरिद गरी उपलव्ध गराउँदै आएको छ । यसले गर्दा संक्रमित व्यक्तिहरुको पहिचानमा निकै ठूलो सहयोग पुगको दावी गरिएको छ । समन्वयको निकै अभाव रहेको जिल्ला प्रशासनको नेतृत्वमा नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्र पाणी पाण्डे, प्रहरी प्रमुख भीम दाहाल र जनस्वास्थ्य प्रमुख मोहन सुवेदीको सक्रियतालाई लिइएको छ ।
उदयपुरमा कोरोना फैलिन नदिन साउन २८ गतेदेखि भाद्र १२ गतेसम्म स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६(३) बमोजिम निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । यसैगरीे मास्क नलगाइ हिँड्नेहरुलाई सक्रमण रोग ऐन २०२० बमोजिम एक सय रुपैयासम्म जरिवाना गरिएको छ । यसरी दण्डित हुनेहरुको संख्या १५० जना भन्दा बढी भइसकेको छ । निषेधाज्ञा लागू भए पनि जनजीवनलाई सामान्य राख्नको लागि बजार क्षेत्र विहान ९ बजेदेखि १२ बजेसम्मको लागि खुल्ला गरिएको छ ।
नेपालमा कोरोनाको संक्रमण सुरु भएको दिनदेखि ४९ दिनसम्म नेपालको बुहान भनिएको उदयपुरमा हालसम्म १११ जना कोरोनाबाट संक्रमित देखिएका छन् । यीमध्ये ३१ जना महिला र ८० जना पुरुष रहेका छन् । र उपचारपछि घर फर्किएका ७९ जना छन् । निको भइ फर्किएका भारतीय जमातीहरु बाहेक अन्य सबैको रक्त समूह पहिचानको काम गरिने छ ।
यसैबीच नाजुक अवस्थामा रहेको विरामीहरुको उपचारको लागि जिल्ला अस्पताल उदयपुरमा दुई वटा भेन्टिलेटर र एबीजी मेसिनसहितको ५ बेडको सघन उपचार कक्ष (आइसियू) को व्यवस्था भएको छ । तर चिकित्सकहरुको अभावमा उक्त उपकरणहरु सञ्चालनमा ल्याउन कठिन भएको निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. जीवनारायण मण्डलले बताउनु भयो । डा. मण्डलकाअनुसार अस्पतालमा १० जना स्थायी एमडी विशेषज्ञ डाक्टहरुको दरवन्दी भए पनि अहिलेसम्म एक जनाको दरवन्दी पनि पूर्ति हुन सकेको छैन ।
एनेस्थेलोजिस्ट, जनरल सर्जन र हड्डिको सर्जनको अभावमा भेन्टिलेटर सञ्चालन गर्न कठिन हुने देखिन्छ । तेसैले सरोकारवाला सबैले उपकरण जोड्ने मात्र होइन चिकित्सक तथा प्राविधिकहरुको व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिन डा. मण्डलले अनुरोध गर्नु भएको छ । भेन्टिलेटर र एबिजी मेसिनसहितको आईसियू कक्ष सञ्चालनमा ल्याउन संघीय तथा प्रदेश सरकारले एक करोड रुपैया निकासा गरेको थियो ।